10-ka filim ee Bollywood-ka ugu sheekada wanaagsanaa 2018 (+Sawiro) – Filimside.net
10-ka filim ee Bollywood-ka ugu sheekada wanaagsanaa 2018 (+Sawiro)
Sanad cusub ayaan galnay balse waa qasab in dib loo milicsado 12-bilood ugu dambeesay ama guud ahaan 2018 wixii ka dhacay Bollywood-ka si qiimeyn gaar ah loo sameeyo. Sidaa darteed waxaan idiin heynaa 10-ka filim ee ugu sheekada wanaagsanaa sanadkii tagay fanka Hindiya.
Qiimeyntan waxaa lagu saleeyay sida aflaantan fariintooda looga helay ee kuma saleesno sida ay tiyaatarada ganacsi weyn kaga sameeyeen. Waxaana 10-kan filim lagu soo xushay sida kuwa filimada ka faaloodaan u amaaneyn ama dhibco badan u siiyeen marka ay taxliil ku sameeyeen fariinta aflaantan.
Fadlan hoos kaga bogo 10-ka filim ee 2018 fariintooda aad loo amaanay sheeko ahaan laga wada heley sidoo kalena in badan oo ka mid ah ay qasab tahay in amaan marino lagu qaato:
Andhadhun 8.8/10 qiimeynta IMD Rating
October 7.6/10 qiimeynta IMDb Rating
Badhaai Ho 8.1/10 qiimeynta IMDb Rating
Tumbbad 8.4/10 qiimeynta IMDb Rating
Stree 7.9/10 qiimeynta IMDb Rating
Manto 7.5/10 qiimeynta IMDb Rating
Raazi 7.8 qiimeynta IMDb Rating
Manmarziyaan 6.9/10 qiimeynta sheekada IMDb Rating
Mulk 6.2/10 qiimeynta IMDb Rating
Mukkabaaz 8.1/10 qiimeynta IMDb Rating
Aqriste aflaanta sare ku xusan imisa ayaad ka daawatay oo aad qireysaa inay ka mid yihiin aflaantii ugu wanaagsanaa 2018 Af Hindi ku daawo ama Af Soomaali ku daawo balse aragtidaada nala wadaag iyo fikrado kale oo dheeraad ah kuna saabsan mowduucaan.
Waxaa Aqrisay 468
Xaged parmanu uga tagteen john abraham filinkiisa 7.8 ayuu weeyane